निर शाहले फुलन्देकी आमालाई रा तभरि यसो गर्न सक्छु भनेपछि
Homeमनोरञ्जननिर शाहले फुलन्देकी आमालाई रा तभरि यसो गर्न सक्छु भनेपछि
काठमाडौं । नेपाली हास्य व्यङ्ग्य बिधामा स्थापित नाम हो जितु नेपाल, उनै जितु “मुन्द्रेको कमेडी क्लब“ कार्यक्रम मार्फत दर्शकमाझ आएका छन् । इन्टरटेन्मेन्टको “मुन्द्रेको कमेडी क्लब“ कार्यक्रम मार्फत जिनु नेपाल आएका हुन् र शोको पहिलो भाग देखिनै युटुबमा राम्रो भ्यूज पाईरहेको छ ।
नेपाल टेलिभिजनबाट गत कार्तिक १९ गतेदेखि हरेक सोमबार राती ८:५० मा प्रशारण हुने यो कार्यक्रमले एक फरक कमेडी प्याकेज दर्शक माझ प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । विश्व भरका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरुमा निकै नै रुचाइएको स्केच कमेडी र सेलिब्रेटी टक शोको फम्र्याटलाई पछ्याउँदै यो कार्यक्रमले नेपालीपन र मौलिक प्रस्तुति समावेश गर्ने गरिएको छ ।
संचालक जितुले भनेका थिए–‘हामीले अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ । दर्शकलाई नयाँ खुराक पस्कन हामी तल्लिन छौ । दर्शकले दिनुभएको सुझावका आधारमा कार्यक्रम परिस्कृत हुनेछ ।’ भारतीय टेलिभिजनमा आउने चर्चित कमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’को ढाँचामा तयार पारिएको यो शोले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएको छ ।
तर, अझै पनि शोमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । उनले भनेजस्तै कार्यक्रम सुधारात्मक बन्दै गईरहेको छ । बृहत रुपमा मनपराऊदै गईएको ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’को ५८ भाग मा निर शाह .. – हेर्नुहोस् भिडियो
प्र चण्डको चीन भ्रमण स्थ गन र हस्यमय! ओलीको स्वा स्थ्य कार ण होइन
चितवनको एक सा मान्य घरमा एक महिनाको वि द्युत म हसुल १० लाख !
generic tadalafil canada – generic tadalafil online tadalafil5mg
buy finasteride proscar propecia – finasteride interactions does propecia cause high cholesterol
propecia webmd – finasteride and tamsulosin avodart vs propecia
purchasing tadalafil online – tadalafil hims liquid tadalafil
Vsdhxp – http://virviaga.com/ best online viagra
Hbbypz – ivermectin gel Dpsxoo kcqtzm
Fhwlhx – furosempi.com Mcgjjl fkqcxr
generic lyrica from canada – buy generic lyrica online lyrica south africa
tamoxifen dose reduction [url=https://nolvadex33.us]tamoxifen dose pct[/url] nolvadex for gynecomastia treatment
tamoxifen side effects forum tamoxifen side effects australia tamoxifen and alcohol tolerance